Uhlelo Lokuphathwa Kokupaka izimoto: kusuka kusiko ezikhathini ezingadingekile.
Ngokusho kwezibalo, njengamanje, iningi lezindawo zokupaka izimoto lisebenzisa izindleko zokufakelwa, izindleko zabasebenzi zelungu labaphathi ziyanda, kanye ne-Perso ...
Ngokusho kwezibalo, njengamanje, iningi lezindawo zokupaka izimoto lisebenzisa izindleko zokufakelwa, izindleko zabasebenzi zelungu labaphathi ziyanda, futhi ukukhokhiswa kwabasebenzi kusebenza ubunzima bokulawula, ukusebenza kahle kanye nokuphaphama kwemoto kuphansi kakhulu.
I-Oversea Country Country Ukungagadiwe yokupaka inkatho ngokuyisisekelo sebenzisa amathikithi ephepha nomshini wokukhokha ozisebenzelayo. Ngakolunye uhlangothi, izindleko eziphelele zemishini esekelayo ziphakeme kakhulu, ngakolunye uhlangothi, lo msebenzi wokupaka izimoto awuhlakaniphe futhi uphele kakhulu, ngokunganakekelwaUkuqashelwa kwelayisense yelayisense ezenzakalelayo kanye nentuthuko yokukhokha ephathekayo, inkinga yokupaka ipaki yezimoto izoncishwa.
NgokusebenzisaIkhamera yokuqashelwa yelayisense yelayisense ezenzakalelayo (I-ANPR) yemoto engena futhi ikhishwe kuIpuleti yelayisense yemoto (ipuleti lenombolo yemoto)Ngokuhlonza okunembile, noma ngabe kungobusuku noma ubusuku, ukukhanya noma akukho izindawo ezikhanyayo,amakhamera okuphepha qapha futhi udubule isithombe kucace bha, ngaleyo ndlela ugwema ukungenelela okwenziwa ngesandla; Abanikazi ngokukhokha ikhodi ye-Scan kanye nenye indlela yokukhokha yeselula yokugcwalisa inkokhelo yokuzisebenzela, ngaleyo ndlela ukufeza indawo yokupaka kunganakekelwa.
Kwindawo ethile enkulu yokupaka izimoto, ivolumu enkulu yethrafikhi, ijubane lemoto kanye nesivinini sokuphuma kuzothinta ngqo izinzuzo zebhizinisi lesikhungo sezentengiso, ngakho-ke layisekela izindlela ezahlukahlukene zokukhokha ukukhokhela abanikazi, futhi ngokushesha futhi kalula.
Ukupaka isikhathi sokupaka isikhathi sokupaka kufikile, lolu uhlelo lokuphathwa kwepaki lwemoto ukushintsha kusuka kumodeli yendabuko kuya kwimodi efanayo engagadiwe,
Ukuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe, ukuqashelwa komuntu okusha, ukudala indawo ekhululekile, ehlakaniphile yokupaka.
PHAMBI Uhlelo lokuqashelwa kwepuleti yelayisense luzohola inkambiso entsha yokuthuthukiswa kwethrafikhi ehlakaniphile
I-Smart City - I-Smart ihola ikusasa OLANDELAYO